Wasiir Beyle oo digniin u diray ganacsatada aan canshuurta bixin – Hornafrik Media Network
Farmaajo: Ma rabo federal ee waxaan doonayaa dowlad dhexe oo awood badan
Sacuudiga oo Somaliland ku qasbay in warqad kasoo qaadato dowlada Soomaaliya
Hoggaamiyihii ka dambeeyay isku dayga afgembiga Ethiopia oo toogasho lagu diley
Wasiir Beyle oo digniin u diray ganacsatada aan canshuurta bixin
By HornAfrik	 On Feb 14, 2019
Muqdisho-(Hornafrik)-Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, Dr ; Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle, Wasiirka ayaa Maanta ka hadlay xaaladda dhaqaale ee Dalka, miisaaniyadda Sanadkan iyo caqabadaha ka taagan canshuur bixinta.
Wasiirka oo la hadlayay Saxaafadda ayaa digniin adag u jeediyay gacansatada aan bixin canshuurta lagu leeyahay, wuxuuna xusay in ay ka filayeen Sanadkan 20 milyan oo Doollar, balse ay kasoo xerootay 14 milyan, taas oo tusaale u ah sida ay u yartahay canshuurta la qaado.
“ Hadii ay jiraan Toban canshuur bixiye waxa kale oo jira Labaatan aan bixin canshuur, Maanta kadib ma aqbalayno inaan canshuur la bixin , Dadka ay doodda inoo socoto ha bixiyeen canshuurta, idin magacaabi maayo Maanta laakiin marka xigto waxaan idiin sheegayaa Dadka Soomaaliyeed, waxaan ku kala baxaynaa sharciga oo ah mid midka inoo dhaxeeya “ ayuu yirri wasiirka Maaliaydda.
Wasiir Beyle waxa uu tilmaamay in ay sameynayaan Taleefoon gaar ah oo looga tala galay canshuur bixiyayaasha.
Wada hadalka deyn cafinyta oo wareegga Saddexaad la soo geba-gabeynayo Bisha April horraanteeda ayuu raja badan ka muujiyay wasiirku, wuxuuna sheegay in ay wali caqabad tahay daqliga ka soo xerooda canshuuraha oo aad u yar.
Cabdishakuur Cali Axmed
Wasaaradda Qorsheynta oo kulan wada tashi ah ka furtay Hirshabeelle
Shirka wada tashiga Istiraatiijiyadda Wacyi gelinta Qaranka oo Maalintii Labaad galay
HornAfrik	 Jun 22, 2019 0